Ụlọ oriri na ọṅụṅụ 👨‍🍳 | Gaa na Hultsfred
Mpaghara emeputa, dara oké ọnụ na oké ọnụ
N'ime obodo Hultsfred, e nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ọpụrụiche dị iche iche. Enwere ike ịchọta nri ụlọ, ee pizzerias, nri ndị China na kebabs.
Nri esi nri nke oma sitere na ihe ndi Swedish. Enwere ike ịgba akwụkwọ maka ụlọ oriri na ọ forụ forụ maka ndị ọzọ, ọ ga-ekwe omume ịme nri. Annika nwere nke buru ibu
N'etiti Målilla na Virserum ị ga-ahụ obere obodo Flaten na Bageriet Björkaholm. Lee ị na-eme achịcha na obere ogo yana jiri ogo dị elu nke ihe ndị mejupụtara ya. Achịcha na-apụta, baguettes,
Målilla Hotell bụ obere họtel nwere ụlọ oriri na ọ restaurantụ .ụ. A na-enye nri ehihie taa, la carte, Pizza na salads ebe a. Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ hasụ nwere ikike zuru oke. Enwere 40
Emåbaren bụ ụlọ oriri na ọ pụ andụ na pizzeria. A na-esi nri ebe obibi n'ụlọ maka nri ehihie n'etiti 1100-1400. Dị ka ihe ọzọ na nri taa, enwere Pizza, salads ma ọ bụ kebabs.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ngwa ngwa, Sibylla bụ ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa. Sibylla na-enye ihe niile sitere na Swedish kpochapụwo "esiri ya na achịcha" (ntụgharị soseji esi nri